Paavhareji muhoro muna Belarus ari pazvinoitwa
Belarus yakasiyana chaizvo Russia, pasinei ari pedyo naye "muvakidzani", uye vanhu vose vanogara mairi kutaura Russian. Uye zvakasiyana - nenhokwe dzakapoteredza kuchena ziso. Chii zvose zviri nemashoko dzemari? Paavhareji muhoro muna Belarus, uyewo Russia, vaine indasitiri. Asi chokwadi kana anogona kunzi dzinogutsa, kubva 15,7 chete% chavagari ehurumende vanogutsikana yavanotambira. Zvisinei, zvinhu zvokutanga pakutanga.
Pari, paavhareji muhoro muna Belarus anenge mamiriyoni 6 rubles vemo. Izvi zvishoma asingasviki 20 000 rubles. ari Russian mari. Asi ichi, chokwadi, mashoko anenge chinoshanda kuna sangano muna 2016. Zvino Belarusian Ruble akaenzana 33.1 Russian. Saka kuti mashoko matsva, paavhareji muhoro muna Belarus iri ~ 600 BYN. Zvino, zvivanakire kunofanira kutungamirira zvose muenzaniso mwero chinonzi pashure sangano.
The soro dziine mubayiro wakaiswa muna Fanipol. Pane vari kuwana avhareji anenge 1460 BYN (48 000 kwiza.). Kwete kure shure uye Pruzhany - muguta rino nhamba dziri 1350 BYN (45 000 kwiza.).
Uye, chokwadi, haigoni kukanganwa pamusoro Minsk - guta guru ehurumende. Maererano ichangobva umboo kubva National Statistics Committee, avhareji muhoro pano 1115 BYN (37 000 kwiza.). Ndizvo 580 emadhora pamwedzi. Kuti vakadaro inenge avhareji muhoro muna Belarus muna 2015. The 2017 inogona kuenzaniswa nenhamba kuti 2016 ndipo.
Zvikuru kunobatsira basa
Kana ukatenda zvose chete nokuongorora kwakaitwa National Committee, zvikuru mari vezvikepe kwoutsinye avhiyesheni. avhareji dzavo muhoro muna Belarus ndiyo 1435 BYN (48 000 rubles). Pakarepo Committee zvinoreva mashoko yakapiwa "Belavia". Zvinonzi vaizviti kuti kushivirira, mamwe kubhadhara uye bonuses aircrew anogamuchira vanenge zviuru 230-260 rubles Russian!
nzvimbo yechipiri muna chepamusoro kuti zvinobatsira zvakaenda anotora IT-bhora, uyewo maindasitiri chokuita Michina kombiyuta. avhareji mari yavo Belarus ndiyo 1627 BYN (54 000 kwiza.).
Vashandi makambani inobereka chemubhotoro (petroleum, marasha tara zvinhu, etc.), ndivo vanenge 1245 BYN (zviri pamusoro 42 000 kwiza.). Zvinokosha kucherechedza kuti basa nyanzvi idzi kunaka, uye padanho muripo chokuita varombo.
Eya, pamusoro apa rudzi Top 3 zvinobatsira zvakaenda ainzi. Zvino unogona kuenda kirasi pakati.
Izvi zvinosanganisira vashandi kushanda zvekutepfenyura zvemari. avhareji mari yavo Belarus vakaenzana 1030 BYN. Zviri pamusoro 35 000, pfungwa, zvose yakafanana muRussia. About chete uye kuwana vashandi kwemakemikari zvirimwa.
Ivo anoteverwa vanhu, ivo vashandi mumunda engineering mapurani. avhareji mari dzavo Belarus, pachidanho 970 BYN. Zviri pamusoro 32 000 rubles.
Gamuchirai zvishoma nhau bhora nyanzvi. Ivo vanobhadharwa anenge 910 BYN ari mwedzi (anenge 30 000 kwiza.). Chete muhoro iri kuchengetwa vanhu chokuita yemigodhi indasitiri. Uye vashandi of emakambani kubudisa hofisi michina.
Huwandu 800-890 BYN (~ 27-29 TR) kugamuchira pamwedzi nenyanzvi vanoshanda mumunda kwesainzi uye zvidzidzo, uyewo vanhu chokuita dzokubudisa zvicherwa (dzakakudzingai mafuta uye simba). On chete muhoro anogona kutarisira vashandi kuvaka uye kutsikisa mabhora.
People, vashandi vari kutengeserana, kugadziriswa, inishuwarenzi, zvivako uye basa motokari dziri pamusoro chete. Kufanana vashandi Railways. Basic avhareji muhoro muRepublic of Belarus vane nyanzvi zvose izvi zviri zvachose zvakafanana.
Yandakapiwa zuva rokutanga January of ano, 2016, munyika iyi yakatogadzirwa risingamboshandisi muhoro 250 BYN (anenge 8300 rubles), vose nhamba havasi kudaro zvakaipa.
Pakupedzisira Ndinoda kukuudzai pamusoro shanu nzvimbo yepasisa-akabhadhara. Zvipfuwo - vashandi of indasitiri paavhareji akabhadhara 480 BYN mumwedzi (15 900 kwiza.). Zvinotevera ndizvo zvoupenyu mvura chokufambisa - (. 15 550 kwiza) 470 BYN. nzvimbo wechitatu pamazita iri yokusika basa uye zvose zvine chokuita nevaraidzo. Vashandi Its mari avhareji 450 BYN (14 900 kwiza.). Munzvimbo wechipiri evanhu mabasa zvekutepfenyura. Muhoro vanhu chokuita basa iri akaenzana 410 BYN (13 580 kwiza.). Uye pakupedzisira, pakutanga ndiye nezvebasa yamabhuku, mamiziyamu, mumaraibhurari uye dzimwe tsika nzvimbo. Vashandi vanoshanda munzvimbo iyi, kugamuchira anenge 400 BYN (13 300 kwiza.).
Sezvaunogona kuona, mari pachiyero kuvagari pedyo nyika duku seyedu. Saka zvazvinosarira kuti dai kwavari kuvandudza upfumi chinzvimbo uye, naizvozvo, kuwedzera mari.
Unopfuurira kushaya mari - zvokuita?
Ndechipi dhipoziti iri mari Bank?
Concept uye mhando macheki. Masvomhu macheki
Where kuenda kana mari inodiwa nokukurumidza - the pawnshop sezvo chingapedza dambudziko
How kushandisa kwepfungwa dzevanhu? Nzira uye unyanzvi hunoenzana vanhu
Shopping rwokuparidza mu China - mushonga neapo
The mushonga "Riabal" - mirayiridzo kushandiswa. "Riabal": mutengo, analogs uye wongororo
Nyaya 1 chiteshi (2015): runyora. Comedy, melodrama, fantasy
"Volkswagen Passat" chiteshi ngoro: nhoroondo, rondedzero muenzaniso
Dzakarukwa shangu (haka) nokurondedzerwa zano. Kubva slippers kuti majombo